Archive du 20170313
Marc Ravalomanana Sokafy ny MBS !
Ela niandrasana izay didy havoakan�ny Filankevi-panjakana na �Conseil d�Etat� izahay, hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mba ela loatra, ka mampierireritra, raha fitoriana napetraka tamin�ny 2015 hatramin�izao tsy voatsara.
Tsy antenaina i Andry Rajoelina Miezaka mitsoka afo ny ekipany
Miezaka mihetsiketsika fatratra ny ekipan�i Andry Rajoelina amin�izao.
TIM Arivonimamo Nanatanteraka fambolen-kazo
Nanatanteraka fambolen-kazo niaraka tamin�ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tany amin�ny distrikan�Arivonimamo ny sabotsy teo ny filoha nasionalin�ny antoko, Marc Ravalomanana.
Fintana omena fa tsy trondro e !
Any ianareo ry Jean ! Manao ahoana ianareo any fa izahay aty efa tena trotraka sy drodroky ny fiainana a ! Efa tena olon-dresy mihitsy e ! Aiza ve ka efa tsy hita izay harapaka kanefa dia mbola nolakoin�ny rivodoza indray !
Takaitran�ny rivodoza �Enawo� Tafakatra 50 ireo maty
Nahatratra 50 ireo namoy ny ainy, 183 naratra, 20 tsy hita popoka, 176.084 ny traboina, 110 693 nafindra toerana nandritra ny fandalovan�ny rivodoza �Enawo�, raha ny tatitra farany navoakan�ny Birao nasionaly miandraikitra ny loza sy ny tandindon-doza (BNGRC) farany.
Antsirabe In�efatra nihetsika ny tany
Miteraka savorovoro amin�ny sain�ny mponina Antsirabe ny fiverimberenan�ny horohorontany tato ho ato. Anisan�ny niteraka resabe mantsy mety hisian�ny fipoahana volkano taorian�ilay horohorontany mafy dia mafy farany iny, izay tsy maty am-pon�ny maro.
Ampitatafika Tafakatra 1400 ireo traboina, mitarazoka ny fanampiana
Anisan�ny kaominina misedra olana tanteraka vokatry ny fandalovan�ny rivodoza Enawo ny kaominina Ampitatafika Atsimondrano.
Mponin�i Madera Namontana Tra-boina tsy fidiny
Vokatry ny fanotofana tany ataon�ireo mpifanolo-bodirindrina amin�izy ireo dia lasa tra-boina tsy fidiny ry zareo ao amin�ny fokontany Madera namontana
Fivondronan�ny skotisma Hanatitra mivantana ny fanampian�ny traboina
Tontosa soa aman-tsara ny fanangonana ireo fanampiana avy amin�ny malalatanana nataon�ny fivondronamben�ny skotisma tetsy Analakely
Edito Sisa tsy rava
Ela nitolona isika hahazo ny fahafahana sy fahaleovantena. Hotsaroana ato ho ato ny faha-70 taonan�ny 29 martsa 1947
�Bus intelligent� Tsy ekenay, hoy ny filohan�ny UCTU
Nankalaza ny faha-30 taonany ny kaoperativa �Analamahitsy Transport� ahitana ny zotra 136 sy ny 183 ka teny Anosy Avaratra no nanamarihana azy.
Fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana Tanora 46 no nahavita fiofanana
Tanora miisa 46 mianadahy no nomen�ny masoivoho Amerikanina fiofanana marolafy nandritra ny fito herinandro ka navoaka tamim-pomba ofisialy ny faran�ny herinandro teo.